Fitsanganan' i Jesoa ho velona - Wikipedia
Ilay fitsanganan-ko velona araka ny Testamenta VaovaoHanova
Ny epistilin' i Paoly, ny toriteny sy ny epistilin' i Petera (na Piera) ao amin' ny Asan' ny Apôstôly dia mitantara fa maty novonoina i Jesoa nefa natsangan' Andriamanitra tamin' ny maty; milaza koa izy ireo fa ny Apôstôly sy ny olona maro hafa, isan' izany ny mpanohitra azy sasany, dia vavolombelona nanatri-maso ny nisehoan' i Jesoa taorian' ny nahafatesany. Ny Kristiana voalohany dia azo faritana ho ireo mpianatr' i Jesoa izay nankalaza azy ho ilay Tompo nitsangan-ko velona, taorian' ny fanomboana amin' ny hazo fijaliana. Izao ny hevitr' i Raymond E. Brown: "ny lahatsoratra ao amin' ny Baiboly dia maneho fa [i Petera sy i Paoly] dia nitory an' i Jesoa izay nitsagana tamin' ny maty nefa tsy lo tao am-pasana ny nofony. Tsy misy ao amin' ny Testamenta Vaovao manontolo na dia tendron-tsoratra iray manambara ny fisian' ny Kristiana nihevitra fa mbola ao am-pasana ny vatan' i Jesoa ka lo. Izany no iheverako fa manantitra mazava tsara ny fitsanganan-ko velona ara-batana ny lahatsoratra ao amin' ny Baiboly".
Araka ireo Epistilin' i PaolyHanova
Araka ny Filazantsaran' i MarkaHanova
Araka ny Filazantsaran' i MatioHanova
Araka ny Filazantsaran' i LiokaHanova
Araka ny Filazantsaran' i JoanyHanova
Ny fisehoan' i Jesoa nitsangan-ko velonaHanova
Ny olana ara-tantaran' ny fitsanganan' i Jesoa ho velonaHanova
Hatramin' i Rudolf Bultmann (tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-20) dia "fanao ny manavaka ny finoana ny Fitsanganana amin' ny maty izay iheverana ny fitsanganan' i Jesoa tamin' ny maty ho zava-nitranga marina tokoa, amin' izay ara-tantara araka ny heviny hentitra". Tsy manan-kambara ny mpahay tantara ny amin' io resaka io na amin' ny fitsipahana izany na amin' ny fanohanana, nefa afaka manamarina izy ireo fa nino ny mpianatr' i Jesoa fa "natsangan' Andriamanitra izy" (Jereo: Rom. 10.9).
Fanomboana an'i Jesoa
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsanganan%27_i_Jesoa_ho_velona&oldid=1040510"
Dernière modification le 30 Novambra 2021, à 11:20
Voaova farany tamin'ny 30 Novambra 2021 amin'ny 11:20 ity pejy ity.